Sida loo Beddelaan MKV in wmv?
Ma badan files MKV ku kaydsan aad disk deegaanka? Oo aad rabto inaad badalo MKV in wmv sabab gaar ah, sida la wadaago filimada MKV laga cabsado qoyska ama saaxiibbada qaba PC ah, xitaa iyaga soo bandhiga on qaar ka mid ah goobaha la wadaago video in ay aqbalaan wmv?
Waxba ma ahan wixii sabab yahay, si loogu badalo MKV in wmv / wmv HD, waxaad u baahan tahay MKV lagu kalsoonaan karo in Converter wmv caawimaad. Haddii aadan heli karin mid ka mid ah la jecel yahay, xitaa wax fikrad ah oo ku saabsan sida loo sameeyo tan shaqo weyn, waxaan soo jeedinaynaa in aad si taxadar leh u tag iyada oo macluumaadka soo socda.
Maqaalkani waxa uu halkan ku barayaa mid MKV smart in wmv HD / wmv qalab diinta. The version Mac / Windows waxaa laga heli karaa halkan.
Dadka isticmaala Windows, waxaad raaci kartaa tutorial tallaabo-tallaabo hoose si aad u samayno shaqo weyn oo isticmaalaya MKV in ay Wmv Video Converter . Dabcan, dadka isticmaala Mac sidoo kale gudbin karaan tutorial taasi, ee habka howlgalka uu yahay mid aad la mid ah.
Tallaabada 1. Import MKV files si MKV in Converter wmv
Ka dib markii ay ku rakibidda iyo ordaya app this, aad u baahan tahay si ay u dajiyaan files MKV aad. Tani MKV smart in Converter wmv ku siinayaa laba siyaabood oo kala duwan ay tan u sameeyaan. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah.
Tag "Beddelaan"> "Add Faylal ay" si ku shuban files MKV aad rabto in aad ku dar.
Si toos ah jiidi mid ama ka badan MKV files barnaamijkan.
Tallaabada 2. Dooro wmv ama wmv HD in liiska qaabka wax soo saarka
"Qaabka Output" icon image in la furo liiska qaab hoos-hoos, dooran wmv ee "Qaabka"> "Video" category ama wmv HD ee "HD" category Hit. Dabcan, ee "Settings" doorasho suuqa kala hadal, waxa kale oo aad astaysto Resolution video, Rate jir ah, Rate Inyar oo Code iwm for files aad.
Tallaabada 3. Start MKV in ay diinta ka wmv
Markii wax walba la sameeyo, kaliya aad u baahan tahay in aad ku dhacay "Beddelaan" si loogu badalo MKV in wmv. Ka dib qaab beddelidda, waxaad ka heli kartaa tan wax soo saarka wmv video in gujinaya "Open Folder". Hadda, waxaad iyaga u daabacaan kartaa qaar ka mid ah websites video qaybsiga in ay aqbalaan wmv sida Flickr. Ama iyaga la kuwa ay leeyihiin kumbiyuutarada wadaagaan.
Waa maxay MKV
MKV (video matroska), waa qaabka weelka ay diyaariyeen Matroska ah. Waxaa qaban karto noocyo kala duwan oo video iyo maqal ah codecs. On Mac, waxaad la QuickTime ciyaari karo files MKV si habsami leh Perian lagu rakibay, iyo ciyaaryahanka VLC waa doorasho kale MKV faylasha loo maqli karo.
Waa maxay wmv?
Wmv, gaaban Windows Media Video, waa qaab video riixo u codecs dhowr lahaansho ee ay Microsoft. Waxaad Radidiyaha karo iyo maamulo files of qaab this ee Windows Media Player.
Dhibaatooyinka Dhignaashada Xalinta loogu Madaxweyne Siilaanyo
Download iyo Beddelaan kasta oo Videos YouTube ka Safari
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan MKV in wmv / wmv HD?